Madaxweynaha DDS oo taariikh u dhigay Itoobiya xalay & Hadal-heyn ka dhalatay.
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya Mustafe Maxamed Cumar oo xalay noqday qofka 2aad eek u hadlaya Afka dawladda Itoobiya, barnaamij toos uga socda warbaahinta dawladdu ay maamusho ayaa si adag uga hadlay arrimo badan oo xiiso lahaa.
Falanqeyn weyn ayaa ka dhalatay khudbadii Madaxweynaha Soomaalida, oo ku wajahanyd qodobo muhiim ah oo waqtigan aad loo xiiseynayay, wuxuuna diiradda saaray dhinacyada isku duubnimada, wada noolaanshaha, Siyaasadda iyo Mustaqbalka Itoobiya aan kala tagin.
Kulankan oo lagu qabtay qasriga madaxtooyada JDFI islamarkaana ay goob joog ahaayeen Raisul wasaaraha JDFI, madaxwaynaha JDFI, afhayeenada golayaasha, madaxda deegaanada, wadaada diimaha iyo dhamaan wakiilada xafiisyada dawlada ee heer federaal iyo wakiilada beesha caalamka, laguna maamuusayay kala wareega sanadka cusub iyo sanadkii tagay, ayaa lagu gorfaynayay arimaha midnimada qaranka iyo ilaalinta wada noolaanshaha.
Madaxwaynaha ayaana goobta kusoo bandhigay 3 arimood oo uu sheegay inay caqabad kuyihiin midnimada qaranka iyo wada noolaanshaha.
1. Heshiis La,aanta Taariikhda
2. Ilbaxnima la,aanta siyaasada (Political civility)
3. Dhibaatooyinka Guud oo sigaara kooxi xal ugu raadiso.
Madaxwaynaha ayaa xalka arimahan kusheegay.
1. Taariikhda inaan laysku qasbin la,iskuna nicin maadaama taariikhdu tahay wax dadyaw kala duwan siyaabo kala duwan uqoreen, wuxuuna ku shabahay in taariikhda aan loogu heshiinin sida diimahaba aan loogu heshiinin, balse laysku ixtiraamo, oo cidina taariikhdeeda aysan cidkale sanka kagalinin.
2. Ilbaxnimo la,aanta siyaasada ayuu sheegay in lagaga bixikaro lahaansho maskax furan oo u carbisan dhagaysiga aragtida dadka kale, wuxuuna sheegay in nidaamka itoobiya hada kudhaqanto ee federaalka ahi uuyahay midka kaliya ee xalka lagu gaadhi karo.
3. Madaxwaynaha ayaa hoosta kaxariiqay in dhibaatooyinka sida guud inoola darsa aysan cidina xalkeeda sigaara isu siinin oo aysan isula buusin balse loo baahan yahay in xal guud loo helo.
Hadalka madaxwaynaha ayaa ahaa mid aad usoo jiitay kaqayb galayaasha fagaaraha